Samsung Gear VR Innovator Edition, fahatsapana voalohany | Androidsis
Samsung Gear VR Innovator Edition, fahatsapana voalohany
Rehefa nampidirin'i Samsung ny Samsung Galaxy Note 4 ary ny Note Edge dia nanaitra anay tamin'ny fampisehoana ny Samsung Gear VR, solomaso virtoaly virtoaly iray izay, amin'ny fampiasana ny efijery ny phablet voalohany an'ny mpanamboatra, io dia namela anay hizaha toetra ny haitao andrasana.
Nandritra ny fanolorana tamin'ny fomba ofisialy ny Samsung Galaxy S6 sy Galaxy S6 Egde, nanaitra anay indray ny mpanamboatra tamin'ny fanehoana kinova ho an'ireo fitaovana ireo. Ny ekipan'ny Androidsis dia tsy nisalasala nanandrana ny solomaso Samsung Gear VR Innovator Edition ho an'ny S6 sy S6 Edge ary ireo no fiheverana voalohany ho anay.
1 Samsung Gear VR Innovator Edition, fitaovana kely kokoa sy maivana kokoa
2 Ny Samsung Gear VR Innovator Edition dia nahavita namorona fahatsapana rendrika tanteraka
3 Samsung Gear VR Innovator Edition, daty famoahana sy vidiny
Samsung Gear VR Innovator Edition, fitaovana kely kokoa sy maivana kokoa
Alohan'ny hanombohana ity famakafakana ity dia tsy maintsy atao mazava tsara izany Ny Samsung Gear VR Innovator Edition dia tsy mifanaraka amin'ny Samsung Galaxy S6 sy S6 Edge ihany, Ka raha manana fitaovana hafa avy amin'ny orinasa Koreana ianao dia tsy afaka hampiasa ny solomaso misy azy ireo.
Ny famolavolana ny Samsung Gear VR Innovator Edition dia mitovy amin'ny an'ny taranaka voalohany. Amin'izany fomba izany no ahitantsika solomaso izay mampifangaro clamp eo aloha hihazonana ilay fitaovana. Amin'ny ilany ankavanana dia misy a bokotra fikitika manaraka izay hidirana amin'ny hafa ny menus, raha ny thumbwheel hita eo ambony dia hamela antsika hanao zoom na hivoaka ny fitaovana araka izay itiavantsika azy.
Ny pad eo alohany dia midika fa, na dia tery aza ny Samsung Gear VR Innovator Edition dia tsy manelingelina izy ireo mandritra ny fampiasana. Hatreto dia mitovy daholo ny zava-drehetra, na dia misy aza ny fiovana. manomboka ity maodely ity dia 15% kely kokoa, mirefy 196 x 107.9 x 82.9 mm.
Zava-baovao iray hafa mahaliana koa ny fampidirana rafi-drivotra mekanika ary mampihena ny lanjany, manao izay hampiasana kokoa ny fampiasana ilay fitaovana, miaraka amin'ireo rafitra fatorana vaovao izay manamora ny fitadiavana ny fandanjana mety hampiasana an'ity gadget ity Ny antsipiriany mahaliana indrindra dia ny fampidirana a seranana microUSB izay hahafahantsika mampandoa ny Samsung Galaxy S6 sy Samsung Galaxy S6 Edge rehefa mampiasa ny Samsung Gear VR Innovator Edition. Azonao atao ny mahita fa manatsara ny endriny i Samsung.
Ny Samsung Gear VR Innovator Edition dia nahavita namorona fahatsapana rendrika tanteraka
Rehefa nisedra ny fanontana Samsung Gear VR Innovator izahay dia tsy ho tsara kokoa ny fahatsapana. Samsung dia naka ny tratra ary nilaza fa ny fanapaha-kevitra dia avo kokoa noho ny an'ny Gear VR mahazatra, zavatra antenaina raha raisintsika ny kaonty. Ny fampisehoana S6 sy S6 Edge an'ny Super AMOLED dia manana hakitroka pixel be dia be: 577ppp.
Araka ny noteneninay, ny fanitrihana tanteraka. Ireo sensor telo, accelerometer, gyrometer ary sensor akaiky, izay mahaforona mpikambana vaovao ao amin'ny elanelan'ny Galaxy S, miaraka amin'ny efijery matanjaka manome tolotra mahavariana.
Nanandrana demo roa izahay ary ny valiny dia nahafa-po kokoa. Mazava fa Samsung dia nanao asa tena tsara tamin'ny Gear VR vaovao na dia misy aza ny teboka iray manohizan'izy ireo manota sy ny tsy fisian'ny fampiharana. Raha marina izany Milk VR dia manitatra ny katalaoginy isan'andro mbola tsy hitantsika izay lalao na fampiharana izay mahatonga ny Samsung Gear VR Innovator Edition ho fividianana saika voatery.
Samsung Gear VR Innovator Edition, daty famoahana sy vidiny
Samsung dia tsy nanamafy ny daty fandefasana solomaso virtoaly virtoaly na ny vidiny ofisialin'ny fitaovana, na dia eo aza ny fiheverana fa amin'ny 10 aprily dia ho tonga eny an-tsena ny Samsung Galaxy S6 sy ny Galaxy S6 Edge, azontsika atao ny mihevitra fa ny Samsung Gear VR Innovator Edition dia handany fotoana kely vao hipetraka. Ny vidiny? Mistery na dia manantena izahay fa hijanona ao 199 euros, mitovy amin'ilay kinova ho an'ny Samsung Galaxy Note 4.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Samsung Gear VR Innovator Edition, fahatsapana voalohany
Atorinay anao amin'ny horonantsary ny fihodinan'ny Z3 amin'ny Android 5.0.2 Sony's Lollipop ofisialy